सीमानामा सधैँ किचलो, कहिले हुन्छ सिमा समाधान ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ११ शनिबार, ०३:३१
सीमानामा सधैँ किचलो, कहिले हुन्छ सिमा समाधान ?
२०७५ मंसिर २१ गते प्रकाशित, l १०:४५
कञ्चनपुर, २० मंसिर । नेपाल–भारत सिमाना नजिक आफ्नै भूमिमा कल्र्भट निर्माणको विषयलाई लिएर डेढ वर्षअघि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु प¥यो । पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्द बजार नाका अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल–भारत संयुक्त सर्वे टिमले सिमा विवाद समाधान गरी कल्भर्ट विवादको समाधान खोजिने बताए पनि अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । घटनाको झण्डै वर्षदिनपछि स्थानीयवासी र सीमापारीका भारतीय नागरिक कल्भर्ट छलेर सीमामा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।
उक्त सीमा नाका सञ्चालन गर्न विभिन्न ठाउँबाट गरिए पनि अझै खुल्न सकेको छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर शहादत प्राप्त गरेका गौतमको विषयमा भारत अझै केही बोलेको छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीकै गोली लागि गौतमको मृत्यु भए पनि भारतले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता स्विकारेको छैन ।
आनन्द बजारको कल्भर्ट निर्माण क्षेत्र भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । पुनर्वास नगरपालिका–९ बीचफाटामा गत वैशाखमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०ले तारजाली हाल्दा अवरोध पु¥यायो । बीचफाटाका स्थानीयवासीले उक्त विद्युतीय तारजाली भारतीय जङ्गलबाट आउने वन्यजन्तु रोक्न लगाएका थिए । उक्त विषयमा विवाद हुँदा केही दिन तनाव भयो । विवाद अघि सहमतिमै भारतीय दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्न बीचफाटामा दुई हजार ९०० मिटर क्षेत्रमा तार जडान गरिएको थियो ।
“तारजाली सहमतिमै जडान गरिएको थियो”, पुनर्वासका स्थानीय पत्रकार दीपेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो । सोही क्षेत्रमा रहेको प्यारातालको विषय पनि लामो समयदेखि विवादित छ ।
पुनर्वास नगरपालिकाको बीचफाटामा विवाद गरेको चार महीनापछि भारतले भीमदत्तनगरपालिका–९ ब्रह्मदेवमा एकलौटीरुपमा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पक्की सडक निर्माण अघि बढायो । यहाँको मुख्य सीमास्तम्भ नं ३ छेउछाउमा करीब १३ सय मिटर वर ९नेपालतर्फ० भारतले ठेक्कामार्फत सडक निर्माण थालेपछि ब्रह्मदेवका स्थानीयवासीले अवरोध पु¥याएका थिए ।
जिल्लास्तरबाट उक्त क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान भएपछि काम अघि बढाउने मौखिक सहमतिपछि भारतले उक्त निर्माण रोकेको छ । ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि दुई देशबीच सीमा विवाद यथावत छ । सीमा विवाद सधैँ भइरहने ब्रह्मदेवका स्थानीयवासी बताउँछन् । मङ्गलबार भीमदत्तनगरपालिकाको गड्डाचौकी, जिमुवा हुँदै ब्रह्मदेव जोड्ने सडक निर्माणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध पु¥याएका छन् ।
भीमदत्तनगरपालिकाले सडक बनाउन पठाएको जेसिभी भारतीय एसएसबीले दशगजा क्षेत्रमा सडक बनाउन लागेको दाबी गर्दै नेपाली पक्षलाई अवरोध पु¥याएका थिए । स्थानीयवासीका अनुसार उक्त जग्गा नेपाली भूमिमै पर्छ ।
सीमाबारे जानकार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मानसिंह भण्डारीले भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति बेलाबखत देखिने गरेको बताउनुभयो । “यहाँ धेरै ठाउँमा विवाद यथावत छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्यारातालदेखि, सडकघाट हँुदै ब्रह्मदेवसम्म विवाद नै छ ।”
नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ सर्वेक्षण, मर्मत सम्भार, नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण तथा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले संयुक्त बैठकपछि निर्णय गर्र्दै फिल्डमा काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
टोलीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही स्थानमा सीमा स्तम्भ जीर्णोद्धारलगायत सर्वेको काम गरेको थियो । संयुक्त टोलीमा रहनुभएका प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले केही दिनभित्रै संयुक्त टिमको बैठक बसेर काम थालिने बताउनुभयो । उहाँले बैठक भारतमा बस्ने सहमति भएको र फिल्ड सर्वे टिम हाल धनगढीमा रहेको जानकारी दिनुुभयो ।
“हामीलाई कञ्चनपुर र कैलालीको सीमा क्षेत्रको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत दुवैको सहमतिमा यहाँका सीमा स्तम्भ निर्माण तथा पुनःनिर्माण थालेका छौँ ।” रासस